सुई लगाई आफन्तबाटै बेचिइन् बालिका ! - Everest Dainik - News from Nepal
सुई लगाई आफन्तबाटै बेचिइन् बालिका !
काठमाडौंः बान्ता नआउने औषधि भनेर लठ्याउने सुई लगाई १५ वर्षीया बालिका आफन्तबाटै बेचिएको खुलासा भएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्त लामाले २०६८ सालमा आफ्नै नजिकको नाता पर्ने बालिकालाई यसरी बेचेको खुल्न आएको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस एसओएसले लियो ६ टुहुरा बालिकाको जिम्मा
आरोपी लामालाई आठ वर्षपछि आज प्रहरीले काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित देउवाचोकबाट पक्राउ गरेको छ ।
उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका सोही ठाउँका ४२ वर्षीय शेरबहादुर लामा भने फरार रहेको प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरोले जनाएको छ । लामाले दोस्रो दिन सोही ठाउँको एक कोठी सञ्चालक लक्ष्मी र हेमालाई १० हजार भारतीय रुपैयाँमा बेचेको ब्यूरोले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस १४ वर्षीया बालिका बलात्कार आरोपमा ६९ वर्षीय वृद्ध पक्राउ
सोही क्रममा एक नेपाली ग्राहकलाई बालिकाले पीडा सुनाएपछि उनकै पहलमा बालिकाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले बालिकालाई उद्धार गरी माइती नेपालमा ल्याएका थिए ।
माइती नेपालले बालिकालाई कात्तिक २० गते ब्यूरोमा बुझाएको थियो । उनको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अभियुक्त लामालाई आज पक्राउ गरेको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक अनुपमशमशेर जवराले जानकारी दिए । स्रोतः गोरखापत्र दैनिक
ट्याग्स: बालिका, सुई